onlineakhabar.com: OMG !!! कलियूग भनेको यहि हो,, नाइजेरियामा मान्छेले जन्माए घोडाको बच्चा.. हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Amazing News, Amazing Video, Amazing Woman, Amazing World, International, Video, Viral Video » OMG !!! कलियूग भनेको यहि हो,, नाइजेरियामा मान्छेले जन्माए घोडाको बच्चा.. हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
OMG !!! कलियूग भनेको यहि हो,, नाइजेरियामा मान्छेले जन्माए घोडाको बच्चा.. हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
हामी भन्ने गर्दछौ कलयुग हो यो, यो कलियुगमा जे पनि हुन्छ । त्यस्तै नाइजेरियामा एक महिलाले मान्छेको बच्चाको सट्टा एउटा घोडाको बच्चा जन्माएकी छन् । नाइजेरियामा जन्मीएका उक्त बच्चाको चार हात र खुट्टा छ भने घोडाको जस्तो मुख छ । महिलाको डेलीभरी पछि बच्चालाई हेर्नेहरुको भिड नै लागेको थियो । महिलाको साथसाथै घरका परिवारहरु पनि सबै यहि सोचमा डुबेका छन् कि मानिसको बच्चाको सट्टा घोडाको बच्चा कसरी पैदा भयो, केहिले त यो बच्चाको नाम अवतार समेत दिएका छन् ।
हस्पिटलको नर्सका अनुसार उक्त महिला पछिल्लो १० बर्ष देखी तरकारी बेच्ने काम गर्दथिइन् । यी महिलाले आफूले कमाएको पैसाले आफंनो ब्वाइफ्रेण्डलाई यूनिभर्सीटीमा एडमिसन समेत गराएकी थिइन् । जब उनले आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डसँग विवाहको प्रस्ताव राखिन् उनको ब्वाइफ्रेण्ड उनिबाट टाढा भए । केहि समयपछि उनको विवाह अरु कोहि सँग भएको थाहा पाइन् । यस्तो खबर पाएपछि उनले पनि अरुसँग विवाह गरिन् ।
खबर अनुसार उक्त महिलालाई कहिले काँहि लाग्दथ्यो उनि प्रेग्नेंट छिन् र कहिले काँही यस्तो नभएको महशुस गर्ने गर्दथिइन् । जब महिला डाक्टरमा गइन् तब डाक्टरले उनको पेटमा सामान्य बच्चा नभएको बताए । डाक्टर ले बच्चा जन्मनुभन्दा पहिले अल्ट्रा साउण्ड गर्ने सल्लाह दिएपनि उनले उक्त सल्लाहलाई बेवास्ता गरिन् । उनले असामान्य बच्चालाई जन्म दिए पनि जन्मीएको केहि समयमा नै मृत्यु भयो ।
Tags : Amazing News Amazing Video Amazing Woman Amazing World International Video Viral Video